आज शनिबार १२ बजे भन्दा पछि दिनभर लोडसेडिङ हुने ! कुन कुन ठाउँमा ? हेर्नुहोस – – Life Nepali
आज शनिबार १२ बजे भन्दा पछि दिनभर लोडसेडिङ हुने ! कुन कुन ठाउँमा ? हेर्नुहोस –
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज पनि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा विद्युत कटौती गरेको छ ।
नियमित मर्मतसम्भारको कारण देखाउँदै आएको प्राधिकरणले आज (शनिबार) बढीमा तीन घण्टा बिजुली कटौती गर्न लागेको हो । काठमाडौंको बालाजु, कुलेश्वर, कलंकी लगायतका क्षेत्रमा बिहान १० बजेदेखि कटौती भएको बिजुली १२ बजे मात्रै आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै बालाजु क्षेत्रको वनस्थली, माछापोखरी, बाइपास, गुम्बाचौकी, मनमैजु पुल, लोकतान्त्रिकचोक, इन्द्रेणी पुल आसपासमा मर्मतका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म विद्युत कटौती हुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लिला अर्यालले जानकारी दिए। अर्यालका अनुसार ट्रान्सफर्मर जोड्नु पर्ने तथा रुख काट्नु पर्ने भएकाले कुलेश्वर कलंकी क्षेत्रमा पर्ने सालिक चोक, पार्टीचोक, अमर ज्योती स्कुल, हंसटार, मालपोत क्षेत्रमा पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बत्ती काटिँदै छ। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
भक्तपुरको ठिमी, चारदोबाटो, कोरियन अस्पताल, गठ्ठाघर, कौशलटार लगायतका क्षेत्रमा पनि बिहान १० बजेदेखि विद्युत कटौती भएको छ । यो क्षेत्रमा १२ बजेसम्म बिजुली नआउने अर्यालले बताए। मुलुकका विभिन्न स्थानमा मर्मत सम्भार गर्नु परेकाले विद्युत कटौती भए पनि यसलाई लोडसेडिङको रूपमा नबुझ्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुलाइ एकाबिहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
Next आज शनिबार १२ बजे भन्दा पछि दिनभर लोडसेडिङ हुने ! कुन कुन ठाउँमा ? हेर्नुहोस –